दशै हाम्रा लागि श’त्रु बनेर आयो सारा खुशी लु’टेर गयो ! गोविन्दको परिवार (हेर्नुहोस भिडियो) – नेपाली सूर्य
October 23, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on दशै हाम्रा लागि श’त्रु बनेर आयो सारा खुशी लु’टेर गयो ! गोविन्दको परिवार (हेर्नुहोस भिडियो)
‘उखुबारीको छेउमा रहेको बाँझो खेतमा ल’छार’पछा’र भएजस्तो देखिएको छ। छेउमै प्रहरीको एउटा जुत्ता पनि फेला परेको छ। त्यसको करिब ५० मिटर पर स्लिपिङ ब्याग र चप्पल भेटिएको छ। त्योभन्दा ५० मिटर दक्षिणतर्फ खेतमै रगत देखिएको र ‘ह ‘त्या गरेर श व मोहना नदीमा फालिएको देखिन्छ’, उनले भने। र’गत देखिएको नजिकै फु ‘टेको अवस्थामा मोबाइल पनि भेटिएको छ। असई विकले बोकेको एक थान ह ‘ति’यार र गो’ ‘ली फेला परेको छैन। postpatrika
दशैँमा नक्कली नोट बिगबिगी, तीन लाख २१ हजार सहित एक पक्राउ !
अनेरास्ववियुको ब्यानर राखी बाढी पीडितलाई राहत दिन खोज्दा मेलम्चीमा झ’डप (भिडियो)